Dowladda Soomaaliya oo shaacisay sababta ay dalka uga saartay Safiirka Kenya - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay sababta ay dalka uga saartay Safiirka Kenya
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo wadatashi ugu yeertay Safiirkeeda u qaabilsan Kenya, Safiirka Kenya uga wakiilka ah Soomaaliya ku wargelisay in dalkiisa wadatashi ugu laabto
Hoos ka Akhriso Qoraal ay dowladda Soomaaliya faah faahisay sababta ay dalka uga saartay Safiirka Kenya ee Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyada oo gudanaysa waajibaadka ka saaran ilaalinta madax-bannaanida dalka, midnimada iyo wadajirka shacabkeeda Soomaaliyeed, kana xun faragelinta qaawan ee arrimaha gudaha dalkeenna ee ay caadeysatay Kenya taasoo dhibaato ku ah xasilloonida iyo horumarka Gobolka, waxay go’aansatay inay wadatshi ugu yeerato safiirkeeda u fadhiya Kenya, sidoo kale, Safiirka Kenya ee Soomaaliya inuu dalkiisa wadatashi ugu laabto.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa u muuqatay in Dowladda Kenya ay si bareer ah u faragelinayso amuuraha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyada oo cadaadis ku haysa Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Maxamed Islaan, si uu u fuliyo qorshaheeda ku aaddan faragelinta iyo carqaladeynta heshiiskii siyaasadeed ee Doorashooyinka ee Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada ay ku gaareen Muqdisho 17kii Sebteembar 2020.
Dhaqamada Kenya waa kuwa ka baxsan curfiga diblomaasiyadeed ee dalal ay ka dhaxayso dano iyo darisnimo, waana dhaqan ka baxsan dhammaan axdiyada iyo heshiisyada diblumaasiyadeed ee caalamiga ah.
Sidaas darteed, waxaan latashi ugu yeernay Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarzan, waxaana la farayaa Danjiraha Kenya ee Soomaaliya Mudane Lucas Tumbo inuu dalkiisa wadatashi dib ugu laabto.
Dowladda Federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo faragaliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madaxbanaanida iyo deganaashaha dalka.
Previous articleNabadoon Caan ahaa oo Caawa lagu dilay Beledweyne
Next articleAl-Shabaab oo weerar qarax ku bilaawday ku qaaday degaanka Bacaadweyne